Lisitry ny mpanome data Skimlinks - Mametraka fanontaniana mety | Martech Zone
Hatramin'izao, mpivarotra dizitaly sy matihanina momba ny maso ivoho mitady hanao dokam-barotra no nivarotra a boaty mainty scenario data. Ny ankamaroany dia tsy injeniera na mpahay siansa momba ny angon-drakitra, ary tsy maintsy nitaky finoana haingana izy ireo ary natoky ny filazan'ny mpamatsy angon-drakitra momba ny kalitaon'ny data, ny famerenana ny valiny aorian'ny fampiharana - ary rehefa vita ny fividianana.
Fa inona no tokony hotadiavin'ny mpivarotra sy ny masoivoho amin'ny mpanome data? Ahoana no ahafahan'izy ireo mamaritra izay mpamatsy tolotra manome vahaolana marina sy mangarahara indrindra? Ireto misy fanontaniana apetraka:
Ahoana no fanangonana ny angona?
Amin'ny alàlan'ny fandinihana mivantana ny mpampiasa tsirairay ve, sa angon-drakitra voaangona, izay ahitàna ny fomba fitondran-tena ao anaty vondron'olona mpampiasa ary avy eo dia esorina amin'ny vondrona lehibe kokoa? Raha tsorina ny angona dia miankina tanteraka amin'ny haben'ny vondrona refesina ny marina, noho izany dia zava-dehibe ny manamarina ny haben'ny vondrona rehefa manombatombana ireo mpamatsy. Nefa tadidio fa na inona na inona ny habeny, ny angon-drakitra voavolavola dia misy hatrany ny fihenan'ny fahamarinana rehefa esorina. Ary aza adino fa rehefa maodely ho lasa fizarana ny angona, ny faminaniana dia hiorina amin'ny vinavina fa tsy ny tena vaovao. Ity mavitrika ity dia mampitombo ny risika tsy ho tanteraky ny angona.
Tsara ny manontany fanontaniana mahazatra izay mamela anao hanombatombana ny tanjaky ny angon-drakitra manerana ny fantsona, mijery mihoatra ny demografika tsotra mba hiteraka fifanakalozana, fanarahana metadata ary famantarana hafa izay maminavina kokoa ny fikasana hividy. Skimlinks mahatratra 15 miliara ny fividianana fikasana fiantsenana avy amin'ny tambajotranà sehatra famoahana 1.5 tapitrisa sy mpivarotra 20,000 isan'andro. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fianarana ny milina sy ny fanadihadiana manatsara eo amin'ny sehatry ny faharanitan-tsain'ny vokatra, dia takatr'i Skimlinks ny taxonomia sy ny metadata misy referansa sy rohy vokatra 100 tapitrisa. Ampiasain'izy ireo ity fampahalalana ity hananganana fizarana mpihaino manova fo be dia be mifototra amin'ny vokatra sy marika mety hividianan'ireo mpampiasa azy, ahafahana manao fampielezan-kevitra mahomby, sosialy ary horonantsary mahomby kokoa.
Karazan-tahiry inona no angonina?
Ny manaraka ao amin'ilay lisitra dia ny hahitana hoe inona ny angona angonina. Ny sokajy dia mety ahitana tsindry, rohy, metadata, atiny pejy, teny fikarohana, marika ary vokatra, fampahalalana momba ny vidiny, fisehoan'ny fifanakalozana, daty sy ora. Arakaraky ny habetsaky ny antontam-panangonana no angonina, ny maodely mpamantatra mialoha ny akora dia tsy maintsy hiasa, izay afaka manatsara ny marina. Raha karazana data vitsivitsy monja no angonina - ohatra, fiheverana na tsindry fotsiny - dia hisy fampahalalana voafetra izay azo ampiasaina hanaraha-maso ireo vinavina na hanatsara ny mombamomba ny mpampiasa. Amin'ity tranga ity, ny loza mety hitranga dia ny mombamomba ny mpampiasa tsotra loatra sy tsy marina.
Skimlinks dia manangona sy mamakafaka ny angona ary mahita ireo lamina manerana ny mpanonta sy ny mpivarotra mba haminavina mialoha ny fomba fividianana. Ohatra, ny fitambaran'ny mpampiasa iray mitsidika pejy 10 amin'ny tranokala dimy samihafa dia mety ho fantatra ho toy ny lamina izay manondro fahalianana amin'ny fividianana entana amin'ny herinandro manaraka. Tsy misy mpitory tokana afaka mamokatra angona Skimlinks miditra amin'ny alàlan'ny tamba-jotra 1.5 tapitrisa, fa ny mombamomba ny mpanonta dia ampahany iray amin'ny angona famantarana. Ny Skimlinks dia mamakafaka ihany koa ny angona azo avy amin'ireo mpivarotra 20,000 XNUMX ao amin'ny tambajotran-tserasera misy azy, toy ny fampahalalana ny vidiny, ny sandan'ny lamina ary ny tantaran'ny fividianana.
Amin'izany, Skimlinks manambatra ireo fambara avy amin'ny tontolo iainana antsinjarany.
Ahoana ny fanamarinana ny angona?
Fahaiza-manao kritika iray hafa tadiavina rehefa manombatombana ireo mpanome angona dia ny fahaizana manamarina ny faminaniana amin'ny fampiharana. Ohatra, izay mpamatsy rehetra izay milaza ny fizarana misy azy ireo dia handroaka ny fiovam-po dia tokony hisambotra ny angon-drakitra hanamafisana fa nisy ny fividianana. Raha tsy misy angona fifanakalozana dia tsy azo atao ny manamarina ny volavola.
Skimlinks dia manana serivisy fikendrena mpanatrika fandaharana izay manampy ny dokambarotra hikendry ireo mpampiasa arakaraka ny toerana misy azy ireo eo amin'ny tsingerin'ny fividianana. Ny faminaniana dia atao amin'ny alàlan'ny angon-drakitra mifototra, vokatra ary ny vidiny, ary manamarina izany amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fifanakalozana. Ny mpampiasa dia arahana hanamarina raha nanao ny fividianana antenaina izy ireo, ary ny rafitry ny fianarana ny milina izay mamorona fizarana dia ampiofanina hatrany mifototra amin'ity fampahalalana ity. Manampy ireo mpividy ny fisorohana tranga iray izay kendreny ho mpanjifa izay mety nanao fikarohana momba ny vokatra tsy zakan'izy ireo na tsy tena mikasa ny hividy. Ny valiny dia ny fampisehoana segondra tsara kokoa.
Ireo mpivarotra dizitaly sy masoivoho manao dokambarotra fandaharana dia tsy maintsy misafidy ny mpanome angon-drakitra marina hanatsarana ny sandan'ny vidiny isaky ny arivo (CPM) na ny vidin'ny vidiny isaky ny asa (CPA). Ny tahan'ny fitomboan'ny sehatry ny dokam-barotra sy ny sehatry ny varotra tarihin'ny data dia mety hanasarotra ny fahafantarana ny fomba hisafidianana mpamatsy angona mety. Saingy amin'ny fampiharana ireo fanontaniana telo mahazatra ireo rehefa manombatombana ny tolo-kevitry ny mpamatsy angon-drakitra, ny mpivarotra nomerika sy ny masoivoho dia afaka manokatra ny boaty mainty ary mahita ny fifangaroan'ny data marina.
Tags: tsindrio angonavidiny isaky ny hetsikavidiny isaky ny fahatsapanacpaCPMDatampamatsy angonaangona kalitaofanamarinana datameta dataMetadatadokambarotra fandaharanampanatrika fandaharanaskimlinksangona transactional
Tena te-hampiasa ny lampihazo tokoa aho… Saingy…
Afaka amin'ny Apple News izahay izao!